Ukuba ufuna ukubonakala mkhulu - kufuneka uqaphele i-SS-cream. Isixhobo esininzi esinokubambisana sinokusombulula imisebenzi emininzi yokwenza.
Umkhiqizo we-SS ulungelelanisa nomthunzi wesikhumba - yingakho unokuphepha ingqalelo intlungu xa ukhetha umbala oyifunayo. Oku kuboniswa ngempembelelo: SS - Ukulungiswa kombala - kuvumela ukufezekisa ingubo engenakulungile ngaphandle koqhwala okanye ukungaqhelekanga. Kule meko, i-CC i-mousses kunye ne-emulsions inokudibaniswa kalula kunye nezinye iimveliso eziqhenkcezayo - i-serum ezinokunyusa, i-tonics, i-boosters, i-bronzers, isichotho-ukufezekisa ithoni efanelekileyo kunye nokuvumelana.
Iimveli zakwa-SS kwanaluphi na ulusu
Iikremu ezinomfanekiso we-MOP kwibhotile ziphela: zifanelekile naziphi na uhlobo lolusu. Ngokubaluleka kubanini be-oily, inhlanganisela, isikhumba seengxaki - iindlela kunye neenkalo zityalo kunye ne-absorptors matte, ihamba kakuhle, ifihla ubomvu kunye ne-pigmentation, inika ukubonakala kakuhle. Amantombazana anomzimba onobuhlungu, xa kuyimfuneko, kufuneka afake imiphumo yokunyusa kunye neengcezu kwi-cream. Ibhonasi eyongezelelweyo - i-UV-filters: khetha inkalo yokukhuselwa kuxhomekeke kwiimfuno zesikhumba.
Ukuzonwabisa ngokusebenzisa ii-SS-creams
Ewe, unokusebenzisa iziponti kunye neebhontshi ngenxa yesiphumo esiqinisekileyo. Nangona kunjalo, i-SS-emulsion ingasetyenziswa ngaphandle kweengxaki kwizandla zakho - iya kufakelwa ngokulula kwaye ngokukodwa kwesikhumba. Nangona kunzima ukuchasana, akunzima ukukususa iCC-iya kuphiliswa ngamanzi ama-micellar okanye i-toni ukwenzela ukukhupha i-remover.
Indlela yokunciphisa ubuso kunye nokuzenzela?
Izizathu zabantwana abaselula abangaphantsi kunye nokupheliswa kwabo
I-fletlet yenkukhu kunye noshizi, ham kunye neyinaninate
Okroshka kunye neengcingo
Ukulungiselelwa kweentlanzi ezidliwayo phantsi kwe-marinade
Isonka siphupha ntoni: ukutolika okuyisiseko